Dadaal…. Lkn 10-kan Nooc ee Dumar ha Guursan Waligaa! | Xaqiiqonews
Dadaal…. Lkn 10-kan Nooc ee Dumar ha Guursan Waligaa!
Guurka waa sunada noolasha Waana mid ka mid h waxyaabihii nuu na faray Nabi Muxamed SCW, hase ahaate Noolasha lamaanaha Ma ahan goob tijaabo, ama Sariir raaxo oo kaliya, Sidaa darteed waa wax loo baahanyahay in uu ninka ka fikiro tilmaamaha qofka uu doonaayo in uu mustaqbalka la wadaago.
Dumarka ma wada ahan hal nooc, mid kastana waxa ay leedahay tilmaamo u gaar ah oo ay kaga duwantahay dumarka kale, waxaana ka mid ah tilmaamaha dumarka, kuwa fiican iyo kuwa aan fiicneyn.
Hadaba waxaan kuu soo gudbineynaa ilaa 10 sifo oo dumarka ay leeyihiin kuwaasi oo ah sifooyin xun oo loo baahanyahay in aad iskaga fogaato wiilyahow.
Dumarka Xamaasada badan
Waa sifada ugu xun sifooyinka aadanaha, sidaa darteed iskaga fogow in aad guursato gabar xamaasad badan maxaa yeelay waxaa badan caradeeda, sidaa darteed guurkiina mar walbo waxa uu qarka u saaranyahay in uu fishilmo.
gaar ahaan dumarka tilmaantan leh waxaa lagu kartaa in ay yihiin kuwa aan dooneyn caruur iyo guur midna, waxa ayna inta badan jeceshahay nafteeda oo kaliya iyo in ay maamusho dadka kale.
Gabadha Maadiga ah
Tilmaamtan waa nooca ugu badan ee ay ku sifeysanyihiin dumarka nool watigan, noocan waxaa lagu kartaa inta badan waxa ay ka fikiraan oo kaliya muuqaalkooda sida dhar quraxan in ay xirtaan,mar walbo in ay ku jirto dugaanka cosmetics imw.
Haweeneyda Ciyaarta jecel
Waa gabadha mar walbo caadeysatay in ay nin ka tagto oo ay nin kale aado, waxa ay ku raaxeysataa in daqiiqad walbo oo waqtigeeda ka mid ah ay ku raaxeysato kaftanka ragga, mar uu dhamaado wicitaan ay nin la hadleysay ka dib waxa ay bilowdaa la hadalka nin kale,hadabba ka titir niyadaada gabadha noocan ah.
Haweeneyda aan Nimaadsaneen.
Waa haweeneyda iska xirato dhar wasaqeysan waxaan kala jeeda si guud ma ahan mid is daneyso hadaba iskaga fogow noocan hadii kale nolashaada ma noqoneyso mid dagan.
Waa nooca rabto in ay hesho Shay walbo iyada oo aan sameynin wax dadaal ah, noocan waxa ay hormuud u tahay dadka aanan garaneyn wax ay tahay nafhurnimada, noocan ma ku sameeyneyso wax abuulgud ah si walbo oo aad nfhurnimo u sameyso.
Gabadha jecel daneynta
Ogow dumarka oo dhan waxa ay jecelyihiin in aad daneyso, blase ogow hadii arinku uu noqdo mid ka badbadis ah oo cusbada ka badato waxa uu noqonayaa sifo aan wanaagsaneyn.
Haweeneyda isku dirka badan
Waxaad u baahantahay qof ku garab qabto mar walbo si aad u sameyso horumar hase haate uma baahnid qof hadal badan oo howsheeda oo dhan ku ilowdo isku dir iyo xan.
Haweeneyda hilmaamka badan
Waa dumarka si dhaqso u lumiya waayihii Shukaansiga iyo dhibaatadi guurka, noocani markii aad guursataba waxa aad la kulmeysaa dibaato maxaa yeelay malahan maskax waxa ay lumineysaa ihtimaamkeeda.
Gabadha aaan Xushmadda Laheyn
Xushmada waa sifo muhiim ah ku dadaal in xaaskaaga mustaqbalka ay leedahay sifadan,hadaba xilliga hasaawaha iska fiiri nooca dumarka aan xushmada laheyn.